आकाशवाणी (Aakashwani): January 2009
भारतसँगको नाता !
भारतसँग हाम्रो सम्बन्ध वास्तवमा नङ र मासुको जस्तो मात्रा होइन त्यो भन्दा पनि ठुलो । रगत र रगतको छ । मेरो कुरा गर्ने हो भने मेरा धेरै आफन्तजनहरु त्यतै छन । भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा सानीमा हुनुहुन्छ भने मुरादाबादमा ठुलि आमाको परिवारै छ । ठुला बा यादव थरका नाम चलेका डाक्टर हुनुहुन्थ्यो । उवाहरु बकैदा भारतीय नागरिक हो । त्यसैगरी फुफुदिदी राजस्थानमा, फुपुहरु दार्जेलिङको खरसाङमा, बडाबा, काका बिर्पाडामा, सिक्किम्मा दिदि-भिनाजु, मुम्बईमा दिदि-भिनाजु, दुवर्समा मामाको परिवारहरु हुनुहुन्छ । अझै थाहा नपाएकाहरु कत्ती होलान कत्ती ।
मेरोजस्तै भारतमा आफन्तहुनेहरु प्रसस्त हुनुन्छ नेपालमा । उग्र भन्दा उग्र हाम्रा नेताहरु पनि जीवनमा एक पटक न एकपतक भारत जानु नै भ्एको होलान । चाहे मिटिङमा होस् वा उपचार तथा अन्य कुनै कामले प्राय: सबै त्यहा पुगेकै छन । खासगरिकन उत्तर भारतीयहरुसँग हाम्रो खानपान, रहनसहन, धर्म, सम्सक्रिती सबै नै मिल्छ । त्यसैले हाम्रो छिमेकी मुलुक चीन र भारतमधे भारत नै नजिकको हो भन्नुपर्छ ।
तर, तर के भन्नुहोस् न ? भारत हाम्रो 'बडे भाई' होइन । छिमेकी मात्र हो । त्यस्भन्दा केही होइन । हामी पनि औटा स्वन्त्र मुलुक, उ पनि स्वतन्त्र मुलुक । हामी पनि यूएनका सार्भभौमसत्ता सम्पन्न देश, भारत पनि त्यस्तै हो । अर्थात विश्वकोलागी भारत र नेपाल बराबर हैसियतका हौ । खै हामीले कुरा बुझेको ?
कहिले हाम्रो राजधानीको मुटु क्षेत्र बानेस्वर सम्म आएर भारतीय प्रहरीले धर्पकड गर्छ, कहिले सुस्तामा सिमा मिच्ने काम गर्छ, कालिपानिमा सेना त राखेकै छ, मेचीतर्फको तराइ बर्सेनी मिचछ, पशुपतिमा पूजारी को राख्ने भन्ने सम्मा तय उसैले गर्छ । त्यतिमात्र हैन एउटा सचिव सरह मात्रको भारतीय राजदुतले हाम्रो सरकार गिराइदिन्छु भन्ने हैसियत राखछन । के हो एस्तो ?
एउटा कबितामा भने झै 'हामी बुद्धु छौ, त्यसैले हामी वीर छौ' । के त्यस्तै हौ त ? यो कस्को कम्जोरी हो ? हामी जनताको वा राजनीतिक पर्टिहरुको ? अब भारतसङको नाता कस्तो राख्ने वा नयाँ नेपाल बनाउन कम्मर कसेका हामी नेपालीले सोच्न ढिला बैसक्यो !
Labels: India, Nepal, nepal-india relation
आफ्नै मलामी जानेहरु ...
अन्तत: अदालतले पशुपतिनाथमा आँफैलाई हराएर छाड्यो ! पटक-पटक देशलाई हराउनु एस्को पुरानै बानी हो । एकादेशको कथामा भने झै सिममा भात पकाउने चुम्का जुराउने शास्त्रका पट्ठु पन्डाले झै एस्ले कानुन बाहेक अर्थोक जानेन । के गर्दा देश र जनाताको भलाई हुन्छ एस्लाई के मतलब ? 'भाड्मे जाये देश!' कानुन, कानुन, कानुन र कानुन !
पशुपतिमा नेपाली मुल पुरोहित नियुक्त हुँदा खुशीले दङ परेको थिए । अब आफ्नो देशकै छोरोले मुलुकै सबैभन्दा ठुलै र संसारमै प्रसिद्ध तथा हिन्दूहरुको पवित्र मन्दिर पशुपतिनाथमा पूजा गर्न पाउनेभये । अब त्यहाको आम्दानी त पारदर्सी हुने नै भयो, त्यसमाथी पशुपतिनाथको सर्बोच्च पदमा नेपाली पुत्र पुग्नेछ भन्ने ठुलो आस लागेको थियो । तर, अदालतको यो आदेशले अत्ती खिन्न बनायो । एस्ले जातिपाती कानुनी रुपमै अन्त्य भाईसकेको 'नया नेपाल' (?) दलित लगायत अन्य हिन्दू जातिको सबैको त्यो सर्बोच्च पदमा पुग्ने बाटो भात्काइदिएको छ । त्यतिमत्र होइन नेपालीहरु अरु त के कुरा पूजा समेत गर्न जान्दैनन भन्ने सन्देस दिएको छ यो आदेशले विस्वलाई । अच्चम्म त के छ भने यो फैसलाको पक्षमा खुशी भएर बिजय जुलुस सम्म निकाल्ने पनि रहेछन मुलुकमा ! बधाई छ देशलाई हराउनेहरुलाई ! बधाई छ आफ्नै मलामी जानेहरुलाई !
तस्बिर नेटबाट लीइएको हो जस्को लेखसँग कुनै सम्बन्ध छैन । - योगेश खपांगी
Labels: Nepal, Pashupatinaath, yogesh, yogesh khapangi
जात्रा पशुपतिको !
'पशुपतिलाई राजनीतिभन्दा माथि राख्न' सल्लाह दिदै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले नयाँ राजनीतीक अध्याय सुरु गरेका छन । प्रस्ट छ यो उन्को 'पानी धमिलो पारेर माछा मार्ने दाउ' हो ।
सयौ बर्ष देखी नेपाली राजनीतिक, धार्मिक, साम्स्कृतिक लगायत आन्तरिक मामालामा समेत नचाहिएको सुझाव दिने गरेको छ भारत्ले हामीलाई । पशुपतिनाथको मामालामा त पूर्व राजासङै गर्दन मिलाएर एक कदम अघी बडेको छ । भलै धर्मको सवालमा हाम्रो आन्द्रा भारतसँग जोडीएको होला तर पशुपतिमा पूजारी को राख्ने भन्ने निर्णय हाम्रो हुनुपर्छ । राष्ट्रियताको बिषयमा सबैले ब्यक्तिगत स्वार्थ त्यागेर एक हुनुपर्छ ।
वार्षिक करोडौ आम्दानी हुने संस्थामा देशको अर्थतन्त्र जोडीएको हुन्छ । त्यसमाथी पशुपतिनाथ त अर्थ र धर्म दुबैसँग गासिएको छ । त्यस्तो गम्भिर बिषयलाई हल्का रुपमा लिनु हुँदैन । अहिले नै ठीक निर्णय गरौ । एस्लाई धार्मिक र राजनीतिक जन्जालमा नजेलौ । सरकारले गरेको नेपाली पुरोहित राख्ने निर्णय बिल्कुल ठीक छ । आवस्यकता परे बेलायतमा झै कानुन पनि परिवर्तन गर्नु पर्छ । राष्ट्रबाद्को सलमा एक हुनु नै सबैको स्वार्थ हुनुपर्छ । यो बिषयमा नेपाली काग्रेसले पूर्व राजासँग गर्दन जोडनपुग्नु राष्ट्रियताको खिलाफमा छ । बेलैमा चेतना भया ।